I-Comet yeHalley: Umvakalisi obuyela kwi-Afar
by UNick Greene
Wonke umntu uvile ngoCompet Halley, owaziwa ngokuba yiHalley's Comet. Ngokusemthethweni kuthiwa yi-P1 / Halley, into yenkqubo yeselanga yinto eyaziwa kakhulu edumile. Ibuyela esibhakabhakeni seMhlaba yonke iminyaka engama-76 kwaye iye yagcinwa ngeenkulungwane. Njengoko ihamba ngeenxa zonke kwelanga, iHalley ishiya emva kwendlela yokuthungatha uthuli kunye neengqungquthela zeqhwa ezenza uhambo lwe-Orionid Meteor lonyaka u-Oktobha. I-ices kunye nothuli olwenza i-nucleus ye-comet ziphakathi kwezinto ezidlulileyo kwi-system yezilanga, ezihamba phambili ngaphambi kwelanga kunye neeplanethi zakha i-4.5 bhiliyoni minyaka edlulileyo.
I-appearance ye-Halley yokugqibela yaqala ngasekupheleni kuka-1985 kwaye yandiswa ngoJuni ka-1986. Yayifundwa ngabafundi beenkwenkwezi ngeenxa zonke zehlabathi kwaye kwaye yavakaswa yi-spacecraft. Isondlo sayo esilandelayo "i-flyby" yomhlaba ayiyi kwenzeka kude kube ngoJulayi 2061, xa iya kubakholwa esibhakabhakeni kubabukeli.
I-Comet Halley iye yaziwa malunga neenkulungwane, kodwa kwada kwaba ngumnyaka we-1705 ukuba isazi seenkwenkwezi u- Edmund Halley sibone umjikelezo wayo kwaye saqikelela ukubonakala kwayo. Wasebenzisa iMithetho yeMotion yase- Isaac Newton ngokutsha kunye kunye neengxelo zeemboniselo kwaye wathi i-comet-eyavela ngo-1531, 1607 no-1682-yayiza kubakho ngo-1758.
Wayekunene-iboniswe ngokufanelekileyo ngexesha. Ngelishwa, uHalley akazange aphile ukuze abone ukubonakala kwayo, kodwa izazi zeenkwenkwezi zabiza emva kwakhe ukuba zihloniphe umsebenzi wakhe.
Comet Halley kunye neMbali Yabantu
I-Comet Halley inesiqalo esikhulu senqanawa, njengokuba ezinye iinqununu zenza. Njengoko ilondela ilanga, likhanya kwaye libonwe ngeenyanga ezininzi ngexesha.
Ukubonwa kokuqala kwale ngqungquthela kwenzeka ngonyaka wama-240 kwaye yayibhalwe ngokufanelekileyo ngamaTshayina. Abanye ababhali beembali-mlando bafumene ubungqina bokuba babonwa ngaphambili, ngo-467 BCE, ngamaGrike asendulo. Enye yezinto ezithakazelisayo "zokurekhoda" ze-comet zafika emva komnyaka we-1066 xa uKarold uHoldold waxoshwa nguWilliam uMnqoli kwi-Battle of Hastings. Imfazwe iboniswe kwi-Tapestry yeBaux, echaza iziganeko kwaye ibonisa ngokugqithiseleyo i-comet ngaphezulu kwimeko.
Ngo-1456, kwinqanaba lokubuyela, uHalley's Comet Pope u-Calixtus III wachaza ukuba yayingummeli kaMtyholi, kwaye wazama ukuxotha lo mcimbi. Kucacile ukuba, ilinge lakhe elingafanelekanga lokuyibeka njengento yokunquba inkolo, ngenxa yokuba i-comet yabuya emva kweminyaka engama-76. Wayengeyena yedwa umntu wexesha ukuchaza ngokucacileyo ukuba yi-comet. Ngexesha elifanayo, ngelixa iikhoboka zaseTurkey zazingqinga iBelgrade (namhlanje eSerbia), i-comet yayichazwa njengesimo esesabekayo sezulu "ngomsila omde onjengeentaka." Omnye umbhali ongazichazi wathi "kwakukho ikrele elide lisuka entshona ..."
Ukuqwalaselwa kwangoku kweComet Halley
Ngexesha le-19 neye-20 leminyaka, ukubonakala kwe-comet esibhakabhakeni sethu kwadityaniswa ngabaosayensi abanomdla omkhulu. Ngethuba lokugqibela kwexesha le-20 leminyaka kwakuqala ukuqala, babecebise iiprojekthi ezijonge phambili. Ngowe-1985 no-1986, izazi zeenkwenkwezi kunye nezobuchwepheshe emhlabeni wonke babumbene ukuze bazigcine njengokuba zidlulile kufuphi neLanga. Idatha yabo yanceda ukuzalisa ibali yinto eyenzekayo xa i-nucleus ye-cometary idlula umoya womoya. Ngelo xesha, ukuhlolwa kwezinto ezibonakalayo kubonakalisa i-nucleus ye-lumpy ye-comet, isampula umsila walo, kwaye wafunda umsebenzi oqinileyo kwi-mmala ye-plasma.
Ngelo xesha, iinqwelo ezinhlanu ezivela kwi-USSR, eJapane, kunye ne-European Space Agency zaya kwiComet Halley. I- Giotto ye-ESA ifumane iifoto ezisondeleyo ze-nucleus ye-comet, ngenxa yokuba iHalley inkulu kwaye iyasebenza kwaye ichanekile kakuhle, ijikeleze rhoqo, yayijoliswe ngokulula kwiGiotto kunye nezinye iiprob.
IiNkcazo zeComet Halley
Nangona ixesha eliphakathi kwe-Halley's Comet's orbit liyiminyaka engama-76, akunjalo lula ukubala imihla xa iya kubuya ngokukongeza iminyaka engama-76 ukuya ngo-1986. Ukuvutha komzimba kwamanye amabhunga kwindlela yokukhanya kwelanga kuya kuphazamisa umjikelezo wayo. I-Jupiter ye-gravitation pull yathintele kwixesha elidlulileyo kwaye inokuyenza kwakhona kwixesha elizayo xa izidumbu zombini zidlula phantse.
Ngaphezulu kweenkulungwane, ixesha lexesha likaHalley liye lahluka ukusuka kwiminyaka engama-76 ukuya kwiminyaka engama-79.3.
Okwangoku, siyazi ukuba lo mthunywa wasezulwini uza kubuya kwinkqubo yangaphakathi yelanga ngexesha lonyaka we-2061 kwaye uya kudlulela ngokusondele kwiLanga ngoJulayi 28 waloo nyaka. Le ndlela esondeleyo ibizwa ngokuthi "perihelion." Emva koko kuya kubuyela ngokukhawuleza kwiprogram yelanga yangaphandle ngaphambi kokubuyela emva kwintlanganiso esondeleyo elandelayo emva kweminyaka engama-76.
Ukususela ngexesha lokubonakala kwalo lokugqibela, izazi zeenkwenkwezi ziye zafunda ngokuphangaleleyo ezinye ii-comets. I-European Space Agency yathumela i- Rosetta i- spacecraft ukuya kwi-Comet 67P / i-Churyumov-Gerasimenko, eyayijikeleza ijikelezo le-comet kwaye yathumela umnini-mhlaba ukuba athathe isampulu. Phakathi kwezinye izinto, i-spacecraft eyayibukele i-jets ezininzi zotshintsho "zivule" njengokuba u -comet esondela kufuphi neLanga . Kwakulinganisa umbala womhlaba kunye nokwakhiwa kwayo, "yahlutha" ukuvumba kwayo , kwaye yabuyisela imifanekiso emininzi yendawo abantu abaninzi abazange bacinge ukuba baya kuyibona.
Ukuhlola iiplanethi ezimancinci
Izigaba eziziimfihlo zeNyanga zichazwe
Imvelaphi Engummangaliso Yenyanga Yenyanga
I-Lunar Eclipses: Indlela Eyenzeka ngayo
Iingxowankulu eziMngcipheko kwiNyanga eziFuncinate zeLunar Geologists
Fumana iVetet Venus
Imililo ebhaliweyo kunye nobushushu obulawulwayo
Ikholeji yeeNew Jersey Jersey Admissions Statistics
Indlela yokwakha izivakalisi kunye neefositives
Inversion encedisayo-phantsi (SAI)
Isihlandlo sokufaka isicelo kwiSikolo soMthetho
SAT Rededigned SAT
Imbali yabantu base-Afrika-baseMerika eNASCAR
Ukucoca amaDots kwiZiqulatho
I-12 ye-All-Time Greatest Funk Iingoma
UBob Dylan noJoan Baez: UKumkani noKumkanikazi weNkcubeko
Imbali Engummangaliso Yedayisi Ezingcolileyo
Ingxelo yeKhadi leNgxelo yeSayensi
Funda iNgoma kwi "Adeste Fideles" ngesiLatini nangesiNgesi
IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa IsiXhosa Isi